Popular Winklevoss abazalwane' patent mfihlo ihlanganisa digital kuthengiselana yezokuphepha - Blockchain Izindaba
Popular Winklevoss abazalwane’ patent mfihlo ihlanganisa digital kuthengiselana yezokuphepha
Inkampani okungewakho Cameron futhi Tyler Winklevoss, abasunguli Gemini cryptocurrency lokushintshisana, unikwe igunya lokwenza uhlelo ihlose ukwenza ngcono ukuphepha zokukhokhelwa digital.
Isicelo bafaka ngoNovemba futhi anikezwe ngoLwesibili U.S. Patent Uphawu Office (USPTO). Likhuluma “uhlelo, indlela, futhi uhlelo umkhiqizo ekucubunguleni ukuthengiselana okuphephile ngaphakathi uhlelo ngamafu,” mi no-Andreya Laucius, Cem Paya kanye Eric Winer okuthiwa njengoba abaqambi (futhi we Winklevosses ifakiwe ohlwini).
Lolu hlelo lusebenzisa inhlanganisela amasu ezivamile cryptographic, kuhlanganise hashi nemisebenzi kanye nesignesha digital. Izinombolo kufakwe isicelo ukuchaza ukuthi uhlelo okuhloswe ukunikeza ukuphepha endaweni digital kwempahla exchange cloud-based.
Kodak uya uthintane SEC ukunquma isimo KODAKCoin
Ngo-March 8, ULwesine ...
Previous Post:Samsung manje okwenza chips ASIC ngoba izimayini cryptocurrency
Next Post:Baidu oluqalisa blockchain-based platform isitokwe isithombe